XOG:cadeymo muujinaya cida kadanbeysey dilkii Jan. Galaal oo lahor dhigey MD Famaajo - Awdinle Online
XOG:cadeymo muujinaya cida kadanbeysey dilkii Jan. Galaal oo lahor dhigey MD Famaajo
Todobaadkii lasoo dhaafey weerar ay fuliyeen dagaalamayaasha Alshabaab oo bartilmaameedkiisu ahaa Hotel Afriik ee magaalada Muqdisho ayaa dhaliyey qasaara nafeed iyo burbur hantiyadeed.
weerarka ayaa ka dhacey goob ay si wayn isugu yimaadaan bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana weerarkaasi ku geeriyoodey dad shacab ah iyo saraakiil miisan kulahaa dalka.
saraakiisha kudhintey weerarka ayaa waxaa kamid ahaa Janaraal maxamed Nuur Galaal oo si weyn looga xasuusto dagaalkii 77kii iyo dhismihii ciidanka qalabka sida ee soomaaliya.
dilka marxuumka ayaa dhaliyey dood kala duwan iyadoo mas’uuliyiin katirsan dowlada soomaaliya ay sheegeen in Janaraalka aanu ku dhiman gacanta kooxda Alshabaab balse lashirqooley.
Xil. Mahad Salaad, xil. Mustaf dhuxulow iyo Janaraal Indhacade ayaa kamid ah mas’uuliyiinta aaminsan in Janaraal galaal ay dileen ciidamo katirsan dowlada soomaaliya ayagoo dalbadey in baaritaan madaxbanaan lagu sameeyo dilka Janaraalka.
ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Taliyaha Dabagalka Abdulla Daahir Abdulla uu hordhigey Madaxwayne Farmaajo Kiis sheegaya in Genaraal Galal ay dileen Ciidamada Dowlada ee ladagalamayey Kooxdii dablayda ahayd ee gashay Hotelka.
MD Farmaajo ayaa lasheegey in uu ka biyadiidey ka carooday isagoo tilmaamey mid aan suuragal ahayn oo ay buunbuuninayaan mucaaradka dowlada.
Taliyaha Dabagalka ayaa Ku wargaliyey madaxwaynaha in Xogta ay keeneen Sirdonka CIA, cadeymo buuxdana laga haayo dilka Janaraalka
war hoose ayaa sheegaya in Madaxwayne farmaajo la hor dhigey muuqaal sir ah oo laduubey xiliga toogashadu dhaceysey kaas oo muujinayey in toogashadu sameynayeen askar katirsan ciidanka amniga dowlada.
MD Farmaajo ayaa la sheegey in aad uga naxay filanwaana kunoqotey muuqaalka ladaawad siiyey madaxweynaha ayaa Teliyaha Dabagalka Kacodsadey in waqti lasiiyo isagoona sheegey in uu aad ugu mashquulsanayahay shirka kasocoda Dhuusamareeb.
Teliyaha Tabagalka oo lagu tilmaamo Fileka Madow ee Farmaajo waa korneyl katirsan CIA mareykanka waana xiriirayaha ugu awooda badan dhanka madaxweynaha iyo CIA-da waxaan xoga xasaasiga ah loo soomariyaa madaxeynaha sarkaalkan sida ay sheegayaan saraakiil katirsan laamaha amaanka soomaaliya oo magacooda qariyey.
Sarkaalkan ayaa lafahamsanyahay in uu haayo siraha qarsoon ee madaxweynaha waxaana marar badan lagu eedeeyey dilal qorsheysan iyo duqeymo aan loo meel dayin oo lagu laayey dad shacab ah.
Previous articleBeesha Caalamka oo markale baaq kasoo saartay Shirka Dhuusamareeb
Next articleShirkii Dhuusamareeb oo natiijo laan ku dhamaaday & dowladda oo ka hadashay